September 2013 | မိုးသကျဦးလှငျ
ထုံးစံအတိုင်း မနက်ခင်းစောစောစီးစီး ဘုရားခန်းဝင်ပြီးသောအခါ အခန်းရှင်းရသည်.။ မကြာမီဆောင်းဝင်တော့ မည်ကိုး..။ မဆီမဆိုင်ဟု ထင်ကြလိမ့်မည်.။ ဆောင်းဝင်လျှင် ကိုယ့်အိပ်ရာထဲကနေ ဘယ်မှ မသွားချင်တာ အမှန်ပင်မဟုတ်ပါလား..။ အခန်းရှင်းရင်းနှင့် တစ်ချိန်က သူမပေးထားသော သော့ခတ်စာအုပ်ပန်းရောင်ကလေး နှင့် သူမမွေးနေ့ ဓါတ်ပုံများကို ပြန်တွေ့သည်…။ ကျွန်တော်ဖွင့်မကြည့်သင့်တော့တာ သိသည်.။ စာအုပ်ကလေး က ဖုံတွေတောင် တက်နေပြီ.။ အထဲမှာ ကျွန်တော် ပြန်မပေးဖြစ်သော couple ပုံများ..။
ကျွန်တော် ပြန် မတမ်းတသင့်တော့ပါ…။ ချန်ရစ်သူနှင့် ကျန်ရစ်သူ အတိမ်အနက် မတူညီကတည်းက တစ်ဖက်စောင်းနင်းဇာတ်လမ်းဆိုတာ ရှင်းရှင်းပေါ်ပြီးမဟုတ်လား..။ ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀ိုင်းထက် ကျွန်တော့်လက်ရှိ မိဘ ကိုခွင့်ပန်ထားသော ချစ်သူကို ကျွန်တော် ဂရုစိုက်ရဦးမည်လေ..။ လက်ရှိ သူမကပဲ ကျွန်တော့် အနာဂါတ်ပင် မဟုတ်ပါလား..။ လောလောဆယ်တော့ ယခု စာအုပ်ကလေးနှင့် ဓါတ်ပုံများကို ကျွန်တော် ဘွဲ့ယူပြီးသည့် နေ့တွင် မော်စကိုမြစ်ထဲ သွားမျောမည်ဟု တေးထားလိုက်သည်..။ ကျွန်တော့် ရည်စူးသူကိုတော့ အသိမပေးဖြစ်..။
ယနေ့အပူချိန်က ၁၀ ဒီဂရီဆဲလ်ဆီးယပ်စ် ခန့်.။ အမှန်တကယ်ခံစားရသည်မှာ ၂ ဒီဂရီဟု မိုးလေ၀ါသ ၀ဘ်ဆိုက်မှာ တွေ့ရသည်.။ ညည်းညူစဖွယ် မော်စကိုဆောင်းရာသီဒဏ်က အစပျိုးနေပြီ..။ အာလူးစားသူများ ကတော့ အေးအေးလူလူ..ဘောင်းဘီတိုဖြင့် ဘောကန်ဆင်းနေတုန်း ။ ကျွန်တော်တို့ ဆန်စားသူ အာရှသား များကတော့ အနွေးထည်ကိုယ်စီဖြင့် ကုတ်ကုတ်ကုတ်ကုတ်..။ ကျောင်းစဖွင့်တော့ ကျောင်းသား စိတ်တွေ ပြန်ပေါက်လာတာလည်းပါသည်.။ စာပြန်ရေးဖြစ်နေတာပင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျေနပ်နေသလိုလို..။
အခန်းရှင်းပြီးတော့ ရည်စူးသူဆီက ဖုန်းခေါ်သည်..။ ခဏမျှ စကားပြောပြီး..။ ထမင်းချက်ဖို့ လုပ်တော့ ဆန်ထုတ်တွေ ကုန်နေတာတွေ့သည်.။ ဟိုဖက်အဆောင်မှာနေစဉ်က ဗီယက်နမ်ဈေးကနေ အိတ်အကြီးတွေ ကားနဲ့ လာပို့သည်.။ ယခုအဆောင်ကျတော့ ကိုယ်တိုင် ကီလိုထုတ်လေးတွေဝယ်စားရသည်.။ ကျောင်းမှာ ဘုရားပွဲ၊ မွေးနေ့ပွဲတွေဆက်နေတော့ ထမင်းမချက်တာ ကြာနေသဖြင့် ဆန်ပြတ်နေတာ သတိမထားမိလိုက်..။
“ ဈေးသွားမယ်.. မိုညက်ကာကိုသွားမှာ..။ ဘယ်သူလိုက်ဦးမလဲ..။ ဟိုဟာမှာ သည်ဟာ မှာ ဆိုက်ကား တွဲခြင်း သည်းခံပါ..။ အဖော်မရှိလို့ခေါ်တာနော်…”
ကော်ရစ်ဒါမှာ ဗေကြီးလို့ ချစ်စနိုးခေါ်သော သူငယ်ချင်း အသံကြားလိုက်သည်.။ အချိန်ကိုက်ပါပဲ..။
“ ဗေကြီး.. ငါလည်း အခုပဲသွားမှာ အတူတူသွားကြတာပေါ့…”
ဘာပဲပြောပြော အဖော်ရသွားသည်.။ မိမိလည်း တစ်ယောက်တည်း မသွားချင်ပါ.။ တစ်ခါတစ်ရံ အမူးသမား များဖြင့်တွေ့လျှင် ပြဿနာရှာခံရတတ်သည်ကိုး..။
ရုရှားရောက် အရာရှိများဟု ခေါင်းစဉ်တပ်လိုက်လျှင် လူမှုရေးကွန်ယက်များပေါ်မှ ပုံရိပ်များကိုသာ ပြေးမြင်တတ်ကြသည်လေ.။ တကယ့်တကယ် အခက်အခဲပေါင်းစုံကြားမှ ရုန်းကန်ရသည်များက မည်သို့ သိနိုင်ပါမည်နည်း..။ ဘာသာစကားအခက်အခဲမှ အစ၊ ရာသီဥတုမတူ၊ လူမျိုးကြီးဝါဒ၏ စိန်ခေါ်မှုတွေ၊ အစုံအစုံ ပါပဲ..။
တစ်ခါတစ်ရံတော့ သူတို့ လူမျိုးတွေနှင့်စကား ပြောဖြစ်ကြပါသည်.။ ရုရှားအများစုက နိုင်ငံခြားသားအ ပေါ်သိပ် မကြေလည်ချင်ကြ.။ သူ့နိုင်ငံ၊ သူ့လူမျိုးလွဲလျှင် မည်သူ့ကိုမှ လူမထင်..။ စကားသွားပြောလျှင်ပင် မတူ မတန်သလို ပြန်ပြောကြသည်.။ ကမ္ဘာတစ်လွှား သံကုန်ဟစ်နေသော လူ့အခွင့်အရေးသမား ဆိုသူတွေကို ပြချင် လှသည်..။ တစ်လောကလည်း ကြုံရသေးသည်.။
“ မင်းတို့က တရုတ်တွေလား..”
“ မဟုတ်ဘူး ငါတို့က အရင်တုန်းက ဘားမားလို့ ခေါ်တဲ့ မြန်မာပြည်က…”
“ ငါ မြန်မာ ဆိုတာ တစ်ခါမှ မကြားဖူးဘူး.၊ ဘားမားဆိုတာလည်း မကြားဖူးဘူး..”
“ အေး.. မင်း ဒီထက်ပိုပြီး စာဖတ်ဖို့ လိုသေးတယ်..”
တစ်ခါတစ်ရံ စိတ်ပေါက်ပေါက်နှင့် အဲဒီလို ဘုတော ပစ်လိုက်သည်.။ အဲဒီလို ပြောလိုက်မှ ခေါင်းတစ်ဆတ်ဆတ်ညိတ် ပြီး..နောက်ဆုတ်သွားကြသည်..။ ရုရှားဆိုသည့် လူမျိုးများက လူကသာ ဥရောပ တစ်ခြမ်း အာရှ တစ်ခြမ်း နေရသည်..။ အာရှသားကို အင်မတန် အထင်သေးသည့်လူမျိုး..။
ဈေးသွားသည့်လမ်းမှာ ပန်းခြံလိုလိုဟာလေးတစ်ခုရှိသည်.။ အမှန်က ပန်းခြံမဟုတ်..။ သူရဲကောင်း တစ်ဦး၏ ရုပ်တုရှိသည့် ပန်းခြံအသေးစားကလေး.။ ၁၂ လရာသီပတ်လုံး တစ်ရက်မှ ပန်းခွေ၊ ပန်းစည်း ပြတ်သည်မရှိ..။ တစ်ရပ်ကွက်လုံးက ဦးသူ ပန်းစည်းချကြသည်မှ ယနေ့ထက်တိုင်အထိ..။ စစ်အတွင်းသူရဲကောင်းများကို ယနေ့ထက်တိုင် မမေ့ကြ..။ စစ်သားများကို အင်မတန်ချစ်ကြသည့် လူမျိုးတွေ.။ ကျေးဇူးသိတတ်သူများ ဟု ဆိုနိုင်သည်ပဲ..။ ရုရှားများ၏ အောင်ပွဲနေ့ (ဂျာမနီကိုစစ်အောင်သောနေ့) တွင် ရင်ပြင်နီမှာ စစ်ပြန်အဘိုးကြီးများကို ရုရှားကလေးငယ်များက ပန်းစည်းပေးကြတုန်း.။ မိဘများက အားကျအောင်ပြကြတုန်း.။ စစ်ပြန်ကြီးများ၏ မျက်ရည်ကို ဆို့နင့်စွာတွေ့ရတုန်း..။ ဂျာမန်တွေ ကျူးကျော်စဉ်က တစ်မြို့လုံးက ယောက်ျားသားတွေအားလုံး အသေခံကာကွယ်ခဲ့သည် ဆမားလန့်စ်လို မြို့က တိုက်ပွဲတွေအကြောင်း ကို ဂုဏ်ယူမြိန်ယှက်စွာ ဆိုနေကြတုန်း.။
ထိုပန်းခြံလေးမှာ ဓါတ်ပုံဝင်ရိုက်ကြသည်.။ အတုယူစရာတွေကိုတော့ စိတ်ထဲမှာ မှတ်သားမိသည်.။ ကျွန်တော် မြန်မာနိုင်ငံပြန်ရောက်သောအခါ အကျိုးပြုစာတမ်းတစ်စောင်လောက် ရေးရဦးမည်ဟု တေးထားမိ သည်.။
ဈေးကို မရောက်ခင် လမ်းသွယ်ခပ်ကျဉ်းကျဉ်းလေးတစ်ခုရှိသည်.။ ထိုလမ်းသွယ်လေးတွင် အမြဲတမ်း တောင်းရမ်းနေသော တာဂျစ်ကစ္စတန် သူတောင်းစား သားအမိ ရှိသည်.။ အကြွေလွယ်သည့်အခါတိုင်း အမြဲ ထည့်ဖြစ်ပါသည်.။ တာဂျစ်ကစ္စတန်တွေက မွတ်ဆလင်တွေမို့၊ ဘာညာ လျှောက်တွေးဖို့ မလိုပါ.။ မိမိက လူသား တစ်ဦးမဟုတ်လား..။
ဈေးရောက်တော့ လိုတာတွေဝယ်ခြမ်းကြသည်..။ အသားနည်းနည်း၊ ဆန်၊ဆီ၊ ကြက်သွန် ဖြူ၊နီ၊ ခရမ်း ချဉ်သီး စသဖြင့် ၀ယ်ရသည်.။ ခရမ်းချဉ်သီးက ဆောင်းမ၀င်ခင် စားရမည်.။ ဆောင်းဝင်လျှင် ခရမ်းချဉ်သီးဈေး က ကြက်သားဈေးထက်ကြီးသွားတတ်သည်…။ လိုတာတွေဝယ်ခြမ်းပြီး ကောင်တာဖက် ပြန်ထွက်အလာမှာ အ၀တ်အစား စုတ်စုတ်ပြတ်ပြတ်နှင့် ကလေးမလေး တစ်ဦး ဘီးပါသော ခြင်းတောင်းကလေးကို တွန်းပြီး ပေါင်မုန့် အကန့်တွေဖက် ၀င်သွားတာတွေ့လိုက်သည်…။ အသက်က သူငယ်တန်း၊ တစ်တန်း၊ နှစ်တန်း အရွယ် ကလေး.။ အစာရေစာ ၀၀လင်လင်မစားရ၍ ၀၀ လင်လင်မရှိလှ..။
ရုရှားမှာ ကလေးငယ်များပင် လမ်းလျှောက်တတ်လျှင် ကိုယ်တိုင်ဈေးဝယ်နေပြီ..။ မုန့်တွေဝယ်သည်.။ ခပ်တည်တည် ၀င်သည်။ လိုသည့်ပစ္စည်းယူသည်.။ အပြန်ကောင်တာမှာ ကလေးကိုင် ပိုက်ဆံ အိတ်သေးသေး လေးတွေထဲက အကြွေစေ့လေးတွေနှင့် အိမ်ရှင်မကြီး စတိုင် ငွေရှင်းလေ့ရှိသည်.။ သို့သော် ကလေးမို့ စနောက် ခြင်းမရှိ.။ ကောင်တာက စာရေးမကလည်း Cash စာရွက်နှင့်တကွ သေချာစွာ အမ်းလေ့ရှိသည်.။ ထို့ကြောင့် ထိုမြင်ကွင်းက ရိုးနေပြီ.။ သို့သော် ထူးဆန်းသည်က မိမိ ရုရှားရောက်ကတည်းက ထိုသို့ စုတ်ပြတ်နေသော ကလေးငယ်လေးကို မမြင်ဖူးခဲ့.။ သူကလေးကတော့ ခပ်တည်တည်ပါပဲ..။
ကောင်တာမှာ တန်းစီနေတုန်း မြေပဲနည်းနည်းယူဖို့ သတိရသည်.။ ဗေကြီးကို ခဏစောင့်ခိုင်းပြီး အထဲ မှာ မြေပဲဝင်ယူသည်.။ စောစောက ကလေးမလေးက ဆယ်ရူဘယ်တန် ပေါင်မုန့် (၅) လုံးကို ခြင်းတောင်းလေးထဲ ထည့်နေတာ တွေ့ရသည်.။ အော်… သူပေါင်မုန့်တွေဝယ်နေတာပါလား..။ ကလေးငယ်အများစုဝယ်လျှင် ကလေးကြိုက်ချောကလတ်လို မုန့်မျိုးတွေဝယ်လေ့ရှိသည်.။ အဆာခံသော ပေါင်မုန့် ညိုကြီးတွေဝယ်ထားတာတွေ့တော့.. စိတ်ထဲမှာ တစ်မျိုးတမည်တော့ ဖြစ်သွားသည်..။ ကျွန်တော်မြေပဲယူပြီး ကောင်တာနားကို ပြန်လာတော့ အဆိုပါ ကလေးလေးကလည်း ကပ်ပါလာသည်.. မိမိနောက်တစ်ယောက်ကျော်က ၀င်တန်းစီသည်..။ သူကလေးက နောက်ဆုံးမှာ…။
ကျွန်တော့်အလှည့်ရောက်တော့ ပစ္စည်းတွေ Sensor ဖြတ်ပြီး ပိုက်ဆံရှင်းသည်.။ ပြီးတော့ ပစ္စည်းတွေ အိတ်တွေထဲထည့်နေရင်း ဗေကြီးကို ခဏစောင့်ရသည်.။စောစောက ကလေးလေးက နောက်ဆုံးမှာပဲ ရှိနေတုန်း..။ ပစ္စည်းတွေထည့်ပြီးတော့ စောင့်နေတုန်း ကလေးကို မြင်နေရသည်.။
ခဏကြာတော့ သူကလေး ဟိုဟိုသည်သည် ငေးကြည့်နေရင်း ချောကလတ်တွေတင်ထားသည့် စင်ပေါ်ကို မျက်စိကရောက်သွားသည်.။ သူ့ခြင်းတောင်းထဲကို တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ပြီး အ၀င်ပေါက်ဝ ဖက်ကို ထွက်သွားသည်.။ လုံခြုံရေးစောင့်သည့်လူက ခပ်စူးစူးကြည့်သည်.။ အလစ်သုတ်မည်လား ဆိုသည့် အကြည့် ဖြင့်.။
ကလေးက အပေါက်ဝနားမှာရပ်သည်.။ အပေါက်ဝ ဖက်ကို လှည့်၍ အပြင်မှာစောင့်နေသော သူမ အမေနှင့် စကားလှမ်းပြောသည်.။ သူ့အမေကလည်း အ၀တ်အစားခပ်ညစ်ညစ် ၊ လက်ထဲမှာ ပွေ့ထားတာ ကလေးတစ်ယောက်၊ ကိုယ်ဝန်တစ်ခုကိုလည်း လွယ်ထားဆဲ.။ အောက်ခြေထဲက အောက်ခြေအကျဆုံး လူတန်းစားတွေမှန်း ကြည့်ရုံဖြင့် သိသာသည်.။
ဘာရယ်မကြားရပေမယ့် သူမ ချောကလတ်စားချင်ကြောင်းပြောနေမှန်းရိပ်စားမိပါသည်.။ အမေက မျက်နှာထားတည်တည်ဖြင့် တစ်ခွန်းပြောလိုက်တော့ ကလေးငယ်က ငွေရှင်းကောင်တာ ဘေးက ချောကလတ်တွေတင်ထားသည့် စင်ပေါ်မှ ဈေးအပေါဆုံး ချောကလတ်လေးကို ရွေး၍ ခြင်းထဲထည့်သည်.။ ခုထိ ကျွန်တော်က စိတ်ဝင်တစားကြည့်နေတုန်း..။
သူငယ်ချင်းဖြစ်သူလည်း ငွေရှင်းပြီး ကျွန်တော့်ဘေးမှာ ပစ္စည်းတွေထည့်နေပြီ..။ ကလေးငယ်ငွေရှင်း အလှည့် ရောက်ပြီ..။
“ ၆၅ ရူဘယ်ကျတယ်..”
ကောင်တာက စာရေးမက လေသံခပ်တင်းတင်းဖြင့် ဆိုသည်.။
သူမကလေးက ခပ်ညစ်ညစ် ရွှေဝါရောင်ဆံပင်လေးကို တစ်ချက်သပ်လိုက်ပြီး.။ ပိုက်ဆံအိပ် သေးသေးလေးကို ဖွင့်၍ အကြွေစေ့တွေကို ကောင်တာပေါ် မှောက်ချသည်.။ ကာပြတ် လို့ ခေါ်သော “ ပြား” စေ့ တွေ.။ ငါးမူးစေ့တွေ..။ အကြီးဆုံး အစေ့ကမှ နှစ်ကျပ် စေ့..။ သူကလေးက သက်ပြင်းချသည်.။ အားငယ်သော မျက်နှာလေးက အထင်းသား..။ ကျွန်တော့် ရင်ထဲမှာ နင့်ကနဲ ဖြစ်သွားသည်..။ စောစောက နောက်က စောင့်နေရ၍ စိတ်မရှည်သော အဘိုးကြီးများပါ နှုတ်ဆိတ်သွားသည်..။ သူတို့ အားလုံး၏ အကြည့်တွေက ကလေးမလေးဆီမှာ..။
ဆံပင်လေးကို သပ်၍ သူ့နောက်က တန်းစီနေသူများကို မော့ကြည့်သည်.။ ပတ်ဝန်းကျင်က လူများကို ကြည့်သည်.။ အရက်ပုလင်း လာဝယ်သော အဘိုးကြီးက ကလေးမလေးကို ပြုံးပြသည်.။ အပေါက်ဆိုးဆိုး စာရေးမက စာနာသနားစွာဖြင့် အကြွေစေ့များကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် ရေနေသည်.။
“ ရော့.ဒီအကြွေစေ့တွေ ပိုတယ်.။ မပျောက်စေနဲ့.. သေချာသိမ်းထား..”
ပိုသော အကြွေစေ့များကို အိပ်ထဲ ပြန်ထည့်သည်.။ စာရေးမက Cash စာရွက်ထုတ်ပေးတော့ သူမက မယူလိုကြောင်း ခေါင်းယမ်းပြသည်.။ သူကလေး ကျွန်တော်တို့ ဘေးက ဖြတ်သွားမှ မှင်သက်စွာ ကြည့်နေမိ သော မိမိတို့ နှစ်ယောက်စလုံး သတိပြန်ဝင်လာသည်.။
“ အာ ဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲ ဗေကြီးရာ.. သူအားငယ်သွားမှာပေါ့..။ ပြီးတော့ သူတို့ လူမျိုးတွေကလည်း ဘယ်လိုလုပ်ကြိုက်မှာလဲကွာ…”
“ သနားပါတယ်ကွာ.။ငါတို့သာ ကောင်တာ အထဲမှာရှိရင် သူစားချင်တဲ့ မုန့် ငါဝယ်ကျွေးပါတယ်…”
သူငယ်ချင်းက မချိတင်ကဲ ဆိုလာသည်..။ ဆိုင်ပေါက်ဝနားမှာ အဆိုပါကလေးမလေးက သူ့မိခင် လက်ထဲကို ပေါင်မုန့်ထုတ်တွေ အပ်နေသည်.။ ချောကလတ်ထုတ်လေးကိုတော့ လက်က ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ကိုင်ထားသည်.။ ဒီပေါင်မုန့်ညိုကြီး ငါးချောင်းကပဲ သူတို့အတွက် တစ်ခုတည်းသော စားစရာလားဆိုတာ တွေးနေမိသည်.။ ပေါင် မုန့်နှင့်တွဲစားရန် ထောပတ်နှစ်၊ ကြက်ဥဆော့စ် ပင် မပါ..။
မလွယ်တာတွေ့ရင် ပိုခက်တဲ့ တစ်ခြားဘ၀တွေ.. ငဲ့ကြည့်ပါဦး ဆိုသော ကိုထီးသီချင်းကို သွားသတိရ ပြန်ပါလေသည်.။
အပြန်လမ်းမှာ ထိုသားအမိက ရှေ့က ..။ မိမိတို့ နှစ်ဦးက အထုပ်တွေဆွဲလျက် ..နောက်က.။
အပြန်လမ်းမှာသူတောင်းစားသားအမိအနီးသို့ရောက်လာသည်..။ခုနကကလေးမလေးက လက်ထဲမှာ ဆုပ်ထားသည့် ချောကလတ်ထုတ်ကလေးကို ဖောက်သည်..။ ချောကလတ်လေးကို တစ်ပိုင်းချိုး၍ သူတောင်း စား အမျိုးသမီး၏ လက်ထဲကို ထည့်လိုက်သည်..။
မိမိတို့ အံ့သြရသည်.။ ရင်တွင်းမှာ Shock အကြီးကြီးရမိသည်..။စိတ်ထဲမှာ ဆရာဖေမြင့် ဘာသာ ပြန်သည့် နှလုံးသား အာဟာရ ရသစာများ ထဲက Dan Clark ၏ The Circus ကို သတိရလိုက်မိသည်.။
ကျွန်တော်သည် အလှူအတန်း ကုတ်ကပ်သူမဟုတ်ပါ.။ ပရဟိတ သမားတစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ပါသည်.။ မိမိ တတ်နိုင်လာတိုင်း၊ မိမိ ပိုက်ဆံ ပိုလျှံသည့်အခါတိုင်း၊ လစဉ် လစာထုတ်တိုင်း အလှူအတန်းလုပ်ခဲ့ပါသည်.။ ပရဟိတ အသင်းတွင်လည်း တာဝန်ခံ အဆင့်အထိ တက်ကြွစွာ ဆောင်ရွက်နေသူဖြစ်ပါသည်.။
သို့ရာတွင် ယခုကဲ့သို့ မြင်ကွင်းကိုမူ တစ်ခါမျှ မမြင်ခဲ့ဖူးပါချေ..။ ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ် နားမလည်သည့် တိုင်းပြည်၊ ကွန်မျူနစ်ဝါဒ ထွန်းကားသည့် တိုင်းပြည်၊ No race, no religion, nothing, all are equal, same oppotunity, no special chance ဆိုတာမျိုးတွေ အသက်ဝင်တက်ကြွသည့် တိုင်းပြည်တစ်ခုတွင် ဤ မျှ လောက် လူသားဆန်သည့် မြင်ကွင်းမျိုးကို မြင်ရလိမ့်မည်ဟု မထင်မှတ်ခဲ့မိပါချေ..။ ကံ၊ ကံ၏ အကျိုးကို ယုံကြည်သူမဟုတ်သော်လည်း လူသားတစ်ဦး၏ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားသည့် မြင်ကွင်းက ကျွန်တော့် အား အကြီးအကျယ် အံ့အားသင့်စေခဲ့ပါသည်.။
စာလုံးလေးက ရိုးရှင်းစွာပင်ရှိပါချေသည်.။ ငွေတစ်ထောင် ပိုင်ဆိုင်သူ တစ်ရာလှူသည်မှာလည်း အလှူ အတန်း ဖြစ်ပါသည်.။ ပရဟိတ ဟုခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်.။ စောစောက ကလေးမလေးကရော.. ။
သူတို့ မိသားစု၏ ညစာထဲက ဖဲ့၍ ခဲခဲယဉ်းယဉ်းဝယ်ထားရသည့် ချောကလတ်လေးကို သူမအလွန် နှစ်ခြိုက်ပါလိမ့်မည်.။ သူ့မိခင် အငြိုငြင်ခံ၍ ပင်သူမ ၀ယ်ခဲ့ရသည်မဟုတ်ပါလား...။ ယခု သူမအလွန်နှစ်ခြိုက် သည့် ချောကလတ်လေး ၏ တစ်ဝက်ကိုပင် သူမ လှူဒါန်းခဲ့သည်မဟုတ်လား..။
ပေးလှူခြင်း၏ အရသာကို အပြည့်အ၀ ခံစားလိုက်ရသော်လည်း အပြည့်အ၀ နားမလည်နိုင်သည့် ကလေးမလေး.။ ဖြူစင်မြင့်မြတ်သော စိတ်ဓါတ်နှင့်ယှဉ်နေသော ညစ်ထေးနိမ့်ကျသည့် လူနေမှု အသုံးအဆောင် များ..။
သူကလေးကတော့ ခြေတစ်ဖက်ချင်း ရှပ်၍ ရှပ်၍ မြူးထူးလွတ်လပ်စွာပြေးသွားပြီ..။ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ကတော့ ပါးစပ် အဟောင်းသားနှင့် ငေးမောနေတုန်း….။
Posted by မိုးသက် at 3:59 PM 12 comments Read more
Labels: ၀တ္ထုတို, ရင်တွင်းဖြစ်တည်မှု...
လောကဓါတ်တစ်ခွင်သည် မဲမဲ မှောင်လျက်ရှိသည်.။ နေ့ခင်းက မပူသောကြောင့် ညခင်းသည်လည်း မသာ လှချေ.။ ခပ်ထိုင်းထိုင်းဥတုနှင့် လိုက်ဖက်ညီသော လရောင် မှုန်ဝါးဝါးသည် တိမ်ညိုများကြား ပုန်းလျှိုး ကွယ်လျှိုးဖြင့် သူရဲဘောကြောင်လျက်ရှိသည်.။
ငမိုးကား ကံကောင်းလှသူတည်း..။ အဆောင်သစ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ပြီးသကာလ. နေရာထိုင်ခင်း ရွေးချယ် ကြလေရာ ကံကောင်းသူ ငမိုးသည် မီးဖိုခန်းနှင့် ကပ်လျက်အခန်းသို့ကျလေရာ အခန်းတွင်း၌ ညှော် နံ့ တသင်းသင်းရှိလေသည်.။ တစ်ဖန် .. ဘုရားခန်းအတွက် အခန်းတစ်ခန်း ဖယ်ရပြန်လေရာ ပိုထွက်လာ သော လူ(၂) ယောက်မှ တစ်ယောက်ကို လက်ခံရ ပြန်၏။ အများတကာ (၂) ယောက်ခန်းတွင် နှပ် နေရချိန် ငမိုးတို့ (၃) ယောက်မှာ မူ (၂) ယောက်ခန်းအတွင်း ညှော်နံ့ကလေး တသင်းသင်းဖြင့် နေရ ပြန် လေသည်.။ အခန်းတွင်းရှိ “ မိုးကျရွှေကိုယ်” သူငယ်ချင်းမှာ အေးဆေး ငြိမ်သက်သူ ဖြစ်၍ တော်ပေသေး သည်.။
ကျောင်းကား ဖွင့်ချေပြီ..။ ဖွင့်ဖွင့်ချင်းဆောက်နှင့်ထွင်းထက်ပင် မဖွင့်ခင် ကြိုထွင်းထားနှင့်သော ငမိုး တို့ ဆရာသည်. နွေကျောင်းပိတ်ရက် အတွင်းပင် ဖုန်းဆက်၍ အိမ်စာပေးလေရာ. ဆရာပေးသောစာတမ်း ကို ကျောင်းဖွင့်စရက်တွင်ပင် တင်ရပြန်လေသည်.။ ဂျူနီယာများ ရောက်လာ၍ မှင်ဖြင့် နေနေသော်လည်း လူမှာမူ ခနော်ခနဲ့ ဖြင့် အားပြတ်လုလု ဖြစ်နေလေသည်.။
ထိုသို့ ကျတ်သရေ မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့် ခညောင်းသော အချိန်အခါသမယတွင် အထူးပင် မအားလပ် လှသော ငမိုးထံသို့ တဂ်ပို့စ် တစ်ပုဒ်ထပ်မံရောက်လာလေသည်.။ ရေးလိုသော်လည်း အချိန်မပိုသော ငမိုး တစ်ယောက် တစ်လောက နွေလ ပို့ထားသော တဂ်ပို့စ်ပင် မစရသေး..။ ယခု တဂ်ခံရပြန်သောအခါ ဗျာ များသွားပြန်လေသည်.။ တဂ်ကား ဘလော့ဒေး .ဟူ၏.။
မည်သူက ထွင်လိုက်သည်မသိ..။ စီနီယာများလည်း ဖြစ်၊ ငမိုးကို ဆူ၊ အော်၊ ဖဲ့၊ နောက်၊ ကလိကလိ လုပ်လေ့ရှိကြသော စီနီယာ အစ်ကို အစ်မများ ဖြစ်ကြသည့်. အစ်မမဒမ်ကိုး၊ အစ်မသကြားပိန်၊ ဘမှုံ၊ ကိုမောင်တစ်ခြမ်း(တစ်ခြမ်းကြွက်ကိုက်ခံရဟူ၏) တို့က ဘလော့ဒေးဟု တညီတညွတ်တည်း ဆိုကြကုန်၏.။ တတ်နိုင်သမျှ လူမသိသူမသိ တိတ်တိတ်ကလေး ပုန်းနေသော ငမိုးမှာ ခြေခင်းလက်ခင်း မသာသော အခါ ဘယ်တုန်းကတုန်း ဟု အရူးကွက်နင်းမည် ကြံ၏.. စာမေးပွဲရှိသလိုလို၊ ကွန်ပျူတာ ပျက်သလိုလို လုပ်မည်ကြံသေး၏ .။ ယနေ့မူ ပေါ်ချေပြီ.။ အားလုံး မေ့နေကြပြီ ထင်သော် လည်း ဘမှုံ ဖော်ချေပြီ..။ ငမိုး ချောင်ခိုနေတာ လူမိချေပြီ..။
ဤ ပို့စ်မရေးမီ တစ်ရက်က ချစ်အစ်မ သကြားပိန်နှင့် စကားပြောဖြစ်သေးသည်.။ မြန်မာပြည်ကို လွမ်းသည် ဟုတစ်ခွန်းဟ ရုံရှိသေး..။ ရည်းစားဘယ်တုန်းက ရသတုန်း တန်းမေးသည်.။ မိမိပင် ဖျားသွား သည်.။ နင်ရေးတာတွေကြည့်ပြီး ငါတန်းသိတယ်. ဟု အတတ်ပြောလေသည်.။ မိမိထက် ထမင်းစော စား လာမှန်း သတိရသည်.။ အစ်မဖြစ်သူ၏ လူကဲခတ် skill ကိုလည်း ဖျားချင်ချင် ဖြစ်သွားသည်.။ မိမိမှာ ယခု ထိ Public ထုတ်ပြရ နိုးနိုး၊ တိတ်တိတ်ကလေးပဲ ထားရနိုးနိုး ချိန်နေတုန်း.။ အစ်မတော် လုပ်သူက သိနေ ချေပြီ.။ အနှီငမိုးကား လူရိုးတည်း...။ သို့ရာတွင် မိမိကိုယ်ကိုယ် မူ လူလည်ဟု ထင်မိလေသည်.။ အမှန်စင်စစ်မူကား ငမိုး၏ နုံကွက်၊ အကွက်များအပြင် အခြား အကြောင်းချင်းရာ များလည်း ရှိသင့် သလောက် ရှိနေသေး၏.။
ငယ်စဉ်ကလေးဘ၀က ခဲဖျက်နှာခေါင်းထဲ ၂ ခါဝင်၊ ပြောင်းဖူးစေ့တစ်ခါဝင်၊ လည်ချောင်းထဲ ဆယ်ပြား စေ့ တစ်ခါဝင်သည့် ဇာတ်လမ်းများကား လူတိုင်းသိပြီးဖြစ်၏.။(ရေးပြီးဖြစ်သည်.) ။ လူမသိသေး သော အကြောင်းအရာ များစွာထဲတွင် ငမိုး ဖွတ်မေ့ ပုတတ်မေ့ အလွန်မေ့တတ်ကြောင်းလည်း ပါသေး၏ ။ သတိထား၍ နေပါသော်လည်း ယခုအထိ မျက်မှန်မကြာခဏ မေ့ကျန်၍ ကျောက်သင်ပုန်းမှ စာကို မမြင်ရ သောကြောင့် အဆောင်ရောက်မှ ပြန်ကူးရသည့် ရက်ပေါင်းလည်း မနည်းတော့.။ သို့ရာတွင် မေ့သည်ကား ယခုမှ မဟုတ်. ။ ငယ်စဉ်တောင်ကျေး ဟိုသည်ပြေး ဘ၀ကတည်းက မေ့တတ်ခြင်း ဖြစ်သည်.။ တစ်ခါက စာဖတ်သန်သူ ငမိုး စာအုပ်အငှားဆိုင်မှ ငှားရမ်းထားသော စာအုပ်ကို ပြန်သွားအပ်သည်.။ အပြန်တွင် အပ် နှံပြီးသော စာအုပ် ပြန်ပါလာလေသည်။ မိမိကိုယ်ကိုယ် စိတ်တိုမိရကား စက်ဘီးဖြင့် နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်သွားအပ်သော အခါတွင်မူ၊ အပြန်တွင် စီးသွားသော စက်ဘီးမေ့ကျန်ရစ်ပြန်လေသည်.။ ထိုမျှ လောက် မေ့သော ငမိုးသည်.တပ်မတော်နည်းပညာဗိုလ်လောင်းသင်တန်းအတွက် ၀င်ခွင့်ဖြေ ဆိုသော အခါတွင် ခုံနံပတ် မေ့၍ နာရီဝက်နောက်ကျမှ ဖြေဆိုရလေသည်..။
စစ်တက္ကသိုလ်ရောက်သောအခါတွင်မူ မိမိကိုယ် မိမိ ပြန်လည် ပြုပြင်ရလေသည်.။ သားတော်မောင် အကြောင်းကို ကောင်းစွာ သိရှိသော ဖခင်သည်.။ အဝေးပြေးကားစီးတိုင်း၊ တက္ကစီ စီးတိုင်း ကားနံပတ်ကို သေချာစွာ မှတ်၍ အိမ်တွင် ပြန်လည်စစ်ဆေး၏.။ စစ်တက္ကသိုလ်ရောက်သောအခါ မေ့လျော့ သော အကျင့်က အတော်ပင် လျော့ပါးသွားလေသည်.။ သို့ရာတွင် အလျှင်းပျောက်သွားသည်ကား မဟုတ်၊ ရံဖန် ရံခါ အလုပ်ရှုပ်သော ၊ အလျင်လိုသော အခါများတွင် တစ်ဖန်ပေါ်ပေါက်လာတတ်ပြန်လေသည်.။
မိမိအကြောင်းကို မိမိပြန်လည် သုံးသပ်နေခြင်းသက်သက် ဖြစ်လေသည်..။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဆိုရပါမူ မိမိလာရာလမ်းသို့ နောက်ကြည့်မှန်မှ ပြန်ကြည့်ခြင်းဖြစ်လေရာ. နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်သူဟု မစွပ်စွဲရန် မူ အထူးအရေးကြီး၏.။ ငမိုးဘလော့ကိုလာသူများမှာလည်း ငမိုးအကြောင်းကို ပါးစပ်ဟလျှင် အူဘယ်နှခွေ ရှိမှန်းသိသူများချည်း ဖြစ်လေရာ.“ ဟင်...လာလာချည်သေး..လုပ်တော့ တလွဲ..” ဟု ထုတ်မပြောရုံသာ ရှိ၍ တကယ်တမ်းမှာမူ.. “ နင်ဟာလေ.. အမှတ်သည်းချေကို မရှိဘူး..” စသဖြင့် ဆူပူငေါက်ငန်း ကြလေ သည်.။
ယခုတစ်လော ဖွဘုတ်တွင် တနင်္လာသမီးလေး ခ၀၀ အထူးခေတ်စား၏.။ ၁၉၉၄ ဂျူလိုင် ၂၁ တွင် မွေးသူ ဖြစ်ရာ ဂျူလိုင်ဖွားဖြစ်၍ ဥာဏ်ရည်ထက်မြက်ခြင်း၊ ရုပ်ရည်ချောမော ခြင်းမှာ အထူး ပြောရန် မလို.။ အထူးသဖြင့် ဂျူလိုင် ၂၀ ၀န်းကျင်မွေးသူများမှာ အထူးပင် ထူးချွန်ပြောင်မြောက်၍ ချောမော လှပ ကြသည်ဟု ကမ္ဘာ့ နက္ခတ်ဆရာကြီးများက တညီတညွတ်တည်း ဆိုကြသည်..။ ခ၀၀၏ ရုပ်ဆင်းသဏ္ဍာန် မှာ ထူးခြား၏.။ တစ်ခါမြင်လျှင် နောက်တစ်ခါ ထပ်ကြည့်ချင်မည့် ရူပါမျိုးဖြစ်၏.။ အချို၊ အချဉ်၊ အငန် ပြည့်စုံသော ဟင်းတစ်ခွက်ကဲ့သို့.. အပိုအလိုမရှိ၊ ပြည့်စုံလှသည့် ရုပ်ရည်မျိုးဖြစ်လေ၏.။ အနှီလုံမငယ်သည်. အင်ဒိုမယ် နှင့် ဓါတ်ပုံတွဲရိုက်ကာ ချီးမွှမ်းခန်းဖွင့်သည့် ကိစ္စဖြင့် မြန်မာဟက်ကာများဖြင့် ပြဿနာ တက်ပြန်လေရာ...မည်သို့ပင် ဆိုစေကာမူ မိမိ အမျိုးကို နိုင်စေလိုသော ငမိုးသည်. ခ၀၀ နှင့် ဟက်ကာများ ကြား အပူတပြင်း စေ့စပ် ညှိနှိုင်းရပြန်လေသည်.။ ငမိုး၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကြောင့် လူဇင်ဘတ်မယ်အနိုင်ရခါနီးမှ သီသီကလေး ကပ်နိုင်သွားလေသည်.။သို့ဖြစ်လေရာ. အဆိုပါဆုကို ခ၀၀ ရရှိခဲ့လျှင် ငမိုး ကြောင့်ဟု မှတ်ယူကြပါကုန်..။
ပေါက်ကရရေးစရာကား မထွက်တော့ချေပြီ.။ ခေါင်းကား နောက်ကျိကျိရှိချေ၏..။ အဘယ်ကြောင့်နည်းဟု မေးမြန်းလျှင်မူ မျက်စိတစ်ဖတ်မှိတ်ပြမည်ဖြစ်သည်.။ ဘလော့ဒေးသည်လည်း ဘလော့ဒေးသာ ဖြစ်၏.။ မိမိမှာ မနှစ်ကလည်း အဘယ်သို့ သွား “ သေ” နေသည်ကို မမှတ်မိ.။ ဘလော့ကား ၂ နှစ်ပြည့်လုချေပြီ..။ အခြားသူများရေးသော ပို့စ်များကား အနှစ်သာရ အပြည့် ရှိလှချေသည်.။ ပေါက်ကရကောင် ငမိုးရေးသော ပေါက်ကရစာသည်... ပေါက်ကရ အစု အဝေးတစ်ခုသာ ဖြစ်ချေသည်.။ ထိုအစုအဝေးများ မျောပါနေသော ပေါက်ကရ စီးကြောင်းတစ်ခု သည် မည်သည့်အချိန်အထိ ရပ်တန့်ခြင်းကင်းလျက် မျောပါနေဦးမည် ဆိုသည်မှာမူ.....။
Posted by မိုးသက် at 4:32 PM 13 comments Read more
Labels: တဂ်ပို့စ်, ရောက်တတ်ရာရာ